(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၇
The Toolbar Shortcut menu
အခုဒီအပိုင်းမှာ သင်ကြားတာတွေကတော့ Google DOCS က User Interface (UI) ကနေတဆင့် စာစီ စာရိုက်လုပ်တာမှာ format ချတာတွေ အသုံးချနည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ တွေ့ရသလို toolbar ပေါ်က shortcut menu တွေ ပုံကလစ်နှိပ်စရာတွေကို အသုံးချပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောင့်ကို ပြောင်းချင်ရင် စာသားကို အရင်ရွေးချယ်ပါ။
ဖောင့် ကို ဆွဲချပြီးတော့ အလိုရှိရာ ဖောင့် စာလုံးဒီဇိုင်းကို ပြောင်းပါ။ မပြောင်းခင်မှာ မှတ်မိဖို့က အရင်ဆုံး မူလဖောင့်က ဘာနာမည်နဲ့လဲ ဆိုတာကို အရင်ဆုံး တွေ့ရပါမယ်။ ဥပမာက ဆိုရင်တော့ Calibri ဖောင့်နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။
ပြီးတော့မှာ ဥပမာပြထားသလို Roboto font ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပါ။
ရွေးထားတဲ့ စာသားက ဖောင့်ပုံစံကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာကို တွေ့ရပါမယ်။
ဂူးဂဲဒေါ့မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖောင့်မတွေ့ရင် တခြားဖောင့်တွေ ထပ်ရှာလို့ ရပါတယ်။ အဲသည်ကို သွားချင်ရင် Font Pulldown Menu အောက်ဆုံးမှာ More Font ကို ရွေးပါ။ သင်တန်းဆရာက ဒီနေရာမှာ အခြားဖောင့်အသစ်တွေနဲ့ ဖော်မက်ချတာကို သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗမာစာဖောင့်ရိုက်မယ်ဆိုရင် ဘရောက်ဇာထဲကနေ ဘယ်လို ပြောင်းလို့ရသလဲဆိုတာကိုလည်း သင်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သည်မှာတော့ ထပ်မပြောပြတော့ပါဘူး။
ဖောင့်ဆိုက် အရွယ်အစား ပြောင်းနည်းကို သင်တန်းဆရာက သရုပ်ပြပေးပါ။
Font size ကနေ အရွယ်အကြီး အသေး ပြောင်းပြပါ။
အခု ဥပမာမှကတော့ မူလ ၁၄ ပွိုင့်ကနေ ၂၄ ပွိုင့်ကို ပြောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖောင့်တွေရဲ့ ကာလာ အရောင်ပြောင်းတာကို သရုပ်ပြပါ။
Text color ကို ဆွဲချလိုက်ပါ။
အဲသည်မှာမှ မူလ အနက်ကနေ အပြာရောင် ဖြစ်ဖြစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ရွေးထားတဲ့ စာသားရဲ့ အရောင် ပြောင်းသွားပါတယ်။
To use the bold, italic, and underline buttons:
ဖောင့်တွေကို ရိုးရိုးစာသားအဖြစ်ကနေ Bold ထင်းအောင်လုပ်တာ။ Italic စာလုံးစောင်းတာ။ Underline မျဉ်းကြောင်းဆွဲတာတွေကို သရုပ်ပြရပါတယ်။
ပြောင်းချင်တဲ့ စာသားကို ရွေးပါ။
အခု မီးနူးမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း စာသားကို ပြောင်းကြည့်ခိုင်းပါ။ bold (B), italic (I), or underline (U)
စာသားတွေကို ဘယ်၊ ညာ၊ အလယ်ခေါင်၊ အားလုံးဖြန့် - စသည်ဖြင့် ညှိတာတွေကိုလည်း သင်ပေးရပါမယ်။
မီးနူးဘားမှာ alignment buttons ၄ ခု ရှိတာကို ထောက်ပြပါ။
Left align: Aligns all selected text to the left margin
Center align: Aligns text an equal distance from the left and right margins
Right align: Aligns all selected text to the right margin
Justify: Text is equal on both sides and lines up equally to the right and left margins; many newspapers and magazines use full justification
အခုကတော့ အောက်က စာသားကို အလယ်ကို ညှိပါမယ်။
စင်တာကို ညှိထားမယ်လို့ ရွေးပါတယ်။
စာသားတွေကြား နေရာ ချဲခြင်း၊ စာပိုဒ်တွေကြား နေရာချဲခြင်း ကို သရုပ်ပြရပါမယ်။
မူလက တကြောင်းစာပဲ ချဲထားပါတယ်။ အက်ဆေးတွေ ရီပို့တွေ ရေးတဲ့အခါ စာကြောင်းတွေကို တကြောင်းနဲ့ တကြောင်း ၂ ကြောင်းခြားတာ၊ တကြောင်းခွဲခြားတာတွေ ဖတ်လို့ ထင်ရှားအောင် လုပ်ကြရပါတယ်။
စာကြောင်း ချဲချင်တာကို အရင်ရွေးပါ။
Line spacing button ကို ဆွဲချပါ။ အဲသည်မှာ ချဲချင်သလောက် နေရာကို ရွေးပါ။
စာကြောင်းတွေ ကြားမှာ စာ ၂ကြောင်းစာ နေရာလွတ်အဖြစ် အလိုအလျောက် ချဲပေးပါတယ်။
စာကြောင်းတွေကြား လိုင်းချဲတာက တနည်း။ နောက်တနည်းကတော့ သာမန်စာကြောင်းနဲ့ စာရိုက်ထားပြီး စာပိုဒ်တွေကြားထဲမှာမှ နေရာချဲတာက နောက်တနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ့်စာပိုဒ် ခွဲရာမှာ ထင်ရှားအောင်၊ ခေါင်းစဉ်တွေ ခေါင်းစဉ်ငယ်တွေ ခွဲပြီး ဆောင်းပါးကို စီစဉ်ရတဲ့အခါမှာ သိသာအောင် လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရိုက်ထားတဲ့ စာပိုဒ် တခုလုံးကို ရွေးပါ။
Line spacing button ကို ဆွဲချပါ။
Add space before paragraph or Add space after paragraph ဆိုတာကို ရွေးပါ။ သူကတော့ စာပိုဒ် မတိုင်ခင် လိုင်းခြားမလား၊ စာပိုဒ်ပြီးမှ လိုင်းခြားမလားဆိုတာကို ရွေးချယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်တွေ အချင်းချင်းကြားမှာ လိုင်းခြားပေးပါတယ်။ စာကြောင်းတွေ ချဲသွားတာ မဟုတ်ပါ။
ပြန်ပြီးတော့ လိုင်းစပေ့ဇင်တွေ ပါရာဂရပ်စပေဇင်တွေ မလုပ်ချင်တော့ရင်လည်း ခုနင်က line spacing button ကို ဆွဲချပြီး Remove space before paragraph or Remove space after paragraph.လုပ်လို့ရပါတယ်။ စာကြောင်းတွေ မူလအတိုင်း ပြန်ချုံ့ချင်ရင်တော့ Single ဆိုပြီး ပြန်ရွေးရုံပါပဲ။
ရုံးသုံး အိမ်သုံး ကျောင်းသုံး အင်တာနက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို သင်ကြားတာ ဖြစ်တော့ အင်တာနက်လိပ်စာတွေ အီးမေးလိပ်စာတွေဆိုတာ မိမိဆောင်းပါးတွေ စာတွေမှာ မရှိမဖြစ် ပါဝင်လာပါတယ်။ သည်တော့ အဲသည် လိပ်စာကို ကို (A hyperlink isalink toaweb address (or URL)) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ရိုက်ထည့်ထားပြီးတော့ တမူထူးခြားမှုအဖြစ် မိမိ ဒေါ့ကူးမင့်ထဲကနေ ၀က်ဆိုက်ဆီ တန်းသွားနိုင်အောင် မောက်စ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး သွားနိုင်အောင် link တွေ ထည့်နည်းကိုလည်း သရုပ်ပြရပါမယ်။
ဟိုက်ပါလင့်ကို ထည့်တဲ့ဆီမှာ ၂ နည်း ရှိပါတယ်။ တနည်းကတော့ ၀က်ဆိုင်လိပ်စာ အပြည့်အစုံကို ထည့်သွင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ http://www.apple.com/ipad လို့ ပေါ်နေတာပေါ့ ။ သူက ၀က်ဆိုက်စာသားအပြည့်အစုံကို Blod with Underline လုပ်ြပီးတော့ ပြပါတယ်။ မောက်စ် အပေါ်မှာ သွားထားလိုက်ရင် မောက်စ်ကလစ်လုပ်စရာ လက်ကလေး ပေါ်လာပါတယ်။ နောက်တနည်းကတော့ လင့်လိပ်စာကြီး တခုလုံး အရှည်ကြီး မပေါ်ဘဲနဲ့ အခုလို Apple iPad ဆိုပြီး ကိုယ်ပေါ်စေချင်တဲ့ စာကြောင်းလေးက အစားထိုးပေါ်နေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်လို လုပ်နည်း ၂ နည်းလုံးကို သင်တန်းဆရာက သရုပ်ပြရပါမယ်။
ဟိုက်ပါလင့်ခ် လုပ်ချင်တဲ့ စာသားကို ရွေးချယ်ပါ။
အဲသည်မှာ Tool Menu ကနေ Insert Link ကို ဆွဲချပါ။
Edit Link ပုံးကလေး အကွက်ကလေး ပေါ်လာပါမယ်။ Text field မှာ ကိုယ်ပေါ်စေချင်တဲ့ စာသား ကြိုက်တာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်လိပ်စာပဲ ထည့်ရမယ် မဟုတ်ပါ။
မပျက်မကွက် Link field မှာတော့ မိမိညွှန်းချင်တဲ့ အင်တာနက်လိပ်စာကို ထည့်ပါ။ ၂ ခု စလုံးမှာ အင်တာနက်လိပ်စာတွေချည်း ထည့်လည်း ရပါတယ်။
အဲသည်မှာ မိမိပေါ်စေချင်တဲ့ အင်တာနက်လိပ်စာကို နှိပ်ပြီး တန်းသွားလို့ရတဲ့ Hyperlink အဖြစ် ပေါ်ပါပြီ။
ကလစ်လိုက်ရင် အဲသည်ဝက်ဆိုက်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲသည်လိပ်စာကို ပြင်ချင် ဖြုတ်ချင်ရင် အဲသည်လိပ်စာကို ကလစ် နှိပ်ပါ။ အဲသည်မှာ Chane | Remove ဆိုပြီး ပြောင်းလို့ ပြင်လို့ ရပါတယ်။
ဒီစာရွက်ကို ပြန်ရိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် ကော်ပီကူးပါ။
1488 Villa Piña Way #201
2 bed 1.5 bath 900ft2
Spanish-style condo in great location
Won’t last! Available June 1
Contact Claire Vasquez @ (double-check cell #)
ABOUT VILLA PIÑA
Beautiful grounds Dine-in kitchen Spacious bedrooms
Private but centrally located, historic Villa Piña is just moments from fine dining, shopping, and public transportation. Enjoy the best of both worlds at Villa Piña—the beauty of nature and the culture ofavibrant neighborhood.
ပထမ ၂ကြောင်းကို center align လုပ်ပါ။
2 bed 1.5 bath က စပြီး Won't last! Available June 1 အဆုံးအထိ ရွေးချယ်ပါ။ line spacing ကို 1.5 ပြောင်းပါ။
For Rent ကို font ပြောင်းပါ။
For Rent ကို font size to 30 pt and bold လုပ်ပါ။
ABOUT VILLA PIÑA ကို font color အစိမ်းပြောင်းပါ။
အောက်ဆုံး စာကြောင်းကို hyperlink ပြောင်းပေးပါ။